Triproof Laydhka, biyaha Light, hoggaamiyo uumi Rikoorka - Gobolka Togdheer
Home is Device
Smart korontada Qalab
Qalabka Smart Qoyska
Biyuhu LED Light
Tri-Caddaynta Laydhka LED
LED Laydhka Saqafkii
T8 Fluoresent Tri-Caddaynta Light
Ningbo ego KORONTADA TECHNOLOGY CO., LTD ayaa commited in ay sameeyaan wax soo saarka nalalka electrionic iyo LED OEM / adeegyada ODM. Hadafka lagu xal dalab nalalka codsiga qalab electronic ah oo ku saabsan naqshadaynta, soo saarta iyo shirka. Waxaan leenahay boqolaal shirkadda nalalka oversea ganacsiga, mashruuca injineernimada waaweyn, mashruuca nalalka dhismaha dawladda iyo qalab si ay u bixiyaan adeeg xirfadeed nalalka tayo leh. Iyada oo ay caanka ah ee guriga smart, Shirkadda abaabulay inay galaan R & D design iyo wax soo saarka alaabta guriga smart. Tayada waa asaasiga ah ee shirkadda, waxaan committeed in ay tayo sare leh, kharash-ool ah, smart saaraha macaamiisha guri.
dunida oo xiiso leh of nalalka LED
Naftaada ha la waxyoonay by sheekooyinka LED aad u kala duwan
nalal cusub oo aan qaali ahayn oo la LED
IP66 Wareega SERIES
Smart Life , Smart Ciir Remote maamusha , smart Home, Smart Home Security , Smart Security & Protection Products , Smart Home Gateway , All Products